Jorte ပြက္ခဒိန် & စည်းရုံးရေးမှူး Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Jorte ပြက္ခဒိန် & စည်းရုံးရေးမှူး
Jorte ပြက္ခဒိန် & စည်းရုံးရေးမှူး APK ကို
သန်း 30 ကျော် downloads, အတူ Jorte လူကြိုက်အများဆုံးပြက္ခဒိန် & စည်းရုံးရေးမှူး applications များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးပြက္ခဒိန် app များကိုတစ်ဦးအဖြစ်အများအပြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့သတင်းစာများအားဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည်။
App ကို Annie ဂျပန်တွင် 10 များအတွက်အများဆုံးလစဉ် Active ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အတူထိပ်တန်း 2016 app ကို!
Yahoo က Tech မှ "Jorte ့ပြက္ခဒိန်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ဟူ.သာ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ-to-နေ့ကအတွေ့အကြုံများကိုစာရငျးအရာနှင့်သင်၏အသက်တာ၌အဓိကအဖွဲ့အစည်းက app ကို, ထိုဒိုင်ယာရီဖြစ်စေချင်တယ်။ "
The Next Web: "သင် themese သို့မဟုတ်သင့် Widgets တွေ၏အရွယ်အစား, သင့်ပြက္ခဒိန်, အရောင်များ, နောက်ခံ၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်သို့ရောက်နေလျှင်အလေးအနက်ထား, ထို့နောက် Jorte ကြည့်ယူပါ။ "
MakeUseOf: "Jorte သည်အခြားပြက္ခဒိန် app များကိုနိုင်စွမ်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျော်လွန်တတ်၏။ "
Lifehacker: သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်အောက်မှာသင့်အလုပ်များကိုစာရင်းပြသ, သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါတစ်လအမြင်အောက်မှာသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြသရန် "စွမ်းရည်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကမှာအရာအားလုံးကြည့်ဖို့တစ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လမ်းပါပဲ။ "
NYTimes Tech မှ ကော်လံကို Google ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် Jorte အကြံပြုထားသည်။
App ကိုတရားစီရငျ: ကြံ့ခိုင်ပြက္ခဒိန်, ပွဲများနှင့် Task Manager ကို။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်လုံးဝစိတ်ကြိုက်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Jorte လုံးဝသင့်ရဲ့နေ့စဉ်အချိန်ဇယားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
Jorte ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင် Jorte ၎င်းတို့၏ရုံး 365 ပြက္ခဒိန်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည် - Jorte ယခု Microsoft က Office ကို365®နှင့်အတူထပ်တူပြုပြီး။
Jorte ယခု Evernote နှင့်အတူထပ်တူပြုပြီး - ပြက္ခဒိန်အမြင်အပေါ်ပြရန်မှတ်စု
ဘေးထွက် Menu ကိုဏ - ထိုဘေးထွက် Menu ကိုတွင်သင်သည်ယနေ့ပွဲများ, ဒိုင်ယာရီ, တာဝန်များကိုတူသောပြသရန်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဏမေတ္တာကိုစာစီစာရိုက်? သင်နှစ်သက်တဲ့ font ကိုရွေးပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်ကိုသုံးပါ! အများဆုံး otf နှင့် ttf font တွေကိုနှင့်အတူ Compatibility ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဏနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Feature ကို - ပြက္ခဒိန်ပေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဘို့ကျန်ကြွင်းမည်မျှရက်ပေါင်းကိုကြည့်ပါ။
Jorte ဒိုင်ယာရီအင်္ဂါရပ်ဏ။ ငါတို့သည်လည်းဖြစ်ရပ်များအတွက်ဓါတ်ပုံထည့်သွင်းရန်တစ် function ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ဏ Jorte တိမ်တိုက်: Multi-device ကိုထပ်တူပြုခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား။
ဏ Lunar ပြက္ခဒိန်ပြသရန် - အခြားအာရှနိုင်ငံများမှတရုတ်အသုံးပြုသူများအတွက် & အသုံးပြုသူများအတွက်ဂရိတ်။
ဏအမျိုးမျိုးသော Widgets တွေသင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တင်ထားရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဏလစဉ်, Daily သတင်းစာနှင့်အပတ်စဉ်ထုတ်အမြင်များရရှိနိုင်ပါသည်။
o completed ချိန်းကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖျောက်ရန်ရွေးချယ်ပါ။
ဏဒါဟာ PC မှာ Google ကပြက္ခဒိန်နှင့် Jorte တိမ်တိုက်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။
Jorte ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ယခု Icons နှင့်အပြင်အဆင်တစ်ဘူဖေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်!
= အဖြစ်အပျက်ပြက္ခဒိန် =
ဒီ feature နှင့်အတူ, သငျသညျရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, သတင်း, အားကစား, ရုပ်ပြ, အစားအစာ & ချက်ပြုတ်နည်းများ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းသတင်းများ, ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & တီဗီသတင်းနှင့်ပိုပြီးကဲ့သို့သင်တို့အကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်ရပ်များင်အများအပြားပြက္ခဒိန်များထည့်နိုင်သည်။
ဏမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (ပိုပြီးအဆင်ပြေလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်တည်နေရာကနေရာသီဥတုရှုမြင်) / သတင်း / အားကစား / စားနပ်ရိက္ခာ & ချက်ပြုတ်နည်း။
= Jorte တိမ်တိုက် (အခမဲ့) =
Jorte တိမ်တိုက်မှ Sync ကို Jorte ပြက္ခဒိန် entries တွေကိုနှင့်လုပ်ငန်းများ။
သင်တစ်ဦးကို PC, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များအနေဖြင့်နေအိမ်, ရုံးနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားထံမှ Jorte တိမ်တိုက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနဲ့အလုပ်စာရင်းများကိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏ကိရိယာများအကြားထပ်တူပြုခြင်း Backup ကို!
Sign-Up အခမဲ့ Jorte တိမ်တိုက်အကောင့်ရရှိရန်နှင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုအတှေ့အကွုံအားသာချက်ယူပြီးစတင်ရန်!
= Jorte Store က =
သငျသညျ Jorte ပြက္ခဒိန်တွင်သုံးစွဲဖို့ icon များ & Themes ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ contents တွေကို Download နှင့်သင့်ပြက္ခဒိန်ကိုစိတ်ကြိုက် start!
- ထို Jorte Store မှမရရှိနိုင်ပါကပိုအများအပြား Icons & Themes ရှိပါတယ်။
- လျှောက်လွှာတုံ့ပြန်မခံခဲ့ရဘယ်မှာပြဿနာ Fixed ။
Jorte ပြက္ခဒိန် & စည်းရုံးရေးမှူး
25.60 ကို MB
Jorte Inc က